सम्बन्ध | मझेरी डट कम
alok — Wed, 07/16/2008 - 07:44
दीप शिक्षा र संस्‍कारमा महत्‍व दिने मध्‍म बर्गिय परिवारको आदर्श पात्र हो । नामधन्‍य बिध्‍यालयबाट राम्रो श्रेणीमा माध्‍यमिक तह उत्तीर्ण गर्छ । डाक्‍टर बन्‍ने धोको छ उसको ! तर उस्‍का पिता साधारण ब्‍यापारी, लाखौंलाख खर्च गर्न सक्‍ने आमत छैन । दीप मानसीक ज्‍वारभाटमा छ , अब के गर्ने ? संझौता !! स्‍थानिय उच्‍च मा बि मा ब्‍यबस्‍थापन बिषयमा दाखिल हुन्‍छ ।
दीपका प्रत्तेक कृयाकलाप र रुपगुणलाइ नियाल्न थालेकी छन्‌ जलुले । उनी पिताको रोजगारी सँगै भारतीय औधोगीक शहर मुम्‍बाइमा जन्‍मेकी आधुनिक बिचार मन पराउने केटी हुन्‌ । दुबैमा आकर्षण छ , घमण्‍ड पनि ! मौनतालाई जलुलेनै चिर्ने जमर्को गर्छीन्‌ । उनको प्रष्‍ताबलाई सहर्ष स्‍विकारर्‍यो दीपले । फलस्‍वरूप २१ वर्षे दीप र १९ की जलुमा एउटा सम्‍बन्‍धको अङ्‌कुरण भयो । सामाजिक पुरातन बिचार बिरुद्ध बिद्रोह गरे । परिणाम अन्‍तर जातीय बिबाह भयो उनिहरुमा,पारिवारीक मन्‍जुरी बीना । दीपलाई छात्रबृत्तीले जापान डोर्‍यायो । ऊ मेहेनतमा तल्‍लिन थियो । "जति टाढा रह्‌यो , उति माया मौलाउँछ ",दीप को ब्‍यबहारले यसै भन्‍थ्‍यो । तर जलुका बैशालु मनमा बिस्‍तारै बिस्‍तारै अषन्‍तोष पैदा गर्दे थियो - रहर र उमङगका चाहनाले । भनिन्‍छ नि "नौ दिन नदेख्‍दा नौलो, बीस दिन नदेख्‍दा बिर्रस्‍यो "। जलुका मनमा दीपका बिरुद्द गुनासा र अबिस्‍वासका चम्‍काहरु चुलिदै गए । ऊनको नजरमा अब दीप नालायक पती छ । न जलुलाई भौतिक - मानषिक सुख दियो, न यथेष्‍ट सम्‍पती नै । केबल भूगोलको सीमापारी कतै नाममात्रको सम्‍बन्‍ध छ । ऊन्‍को सोचमा कहालीलाग्‍दो पाहाड उभिए । अहिले उनिहरु एउटै भूगोलको सिमानामा छन्‌ तर साथ छैन । नत कानुनी रुपमै अलग छन ! सुनिन्‍छ , आजकाल दीप मानसिक बिछिप्‍त छ रे प्रेम बीयोगमा ।
किस्सा - २
धनबहादुर, ब्‍यापारको क्रममा बनेपाबाट बसाइ सरेर आएका नेवार परिवारको कान्‍छो छोरो । सम्‍पन्‍न वर्गको नभएपनि साथीभाइ बीचमा ऊस्‍को छुट्‌टै रवाफ छ । मिठाई, चकलेट र आइसक्रीमको भोज गर्न सक्‍ने उस्‍को आमत छ । शत्ति सधैं सम्‍पन्‍नता कै पछाडी त घुमेको हुन्‍छ । राजनीतिमा हेर्नुस्‌, इतिहासमा हेर्नुस्‌, समाज र संगठनको त कुरै छोडौं, बिद्वानमा पनि बिचलन आउछ सम्‍पन्‍नताको अगाडी । अनि त्‍यो फुच्‍चे केटोको त के कुरा ? खुल्‍ला आकाशको रोमान्‍चक उडानमा हराइदिन्‍छ आफ्‌नो जिन्‍दगीलाई ।लहैलहै न हो, लागू पदार्थको सेवनमा फस्‍छ । धन्‍नै दिदीका श्रीमान्‌ परिवारमा चल्‍ता-पुर्जा रहेछन्‌ र बिदेशको टीकट कटाइदिए , दु‍रर्ब्‍यसन्‌ले जकड्‌नु अगावै ।अब देख्‍यो धनबहादुरले देशमा गरेको दादागीरी र नबाफी पन । बल्‍ल तल्‍ल हारगुहार गरेर काम पाउने भाथ्‍यो , पर्यटकीय आगमनको इजाजतको समयाबधिले हात हल्‍लाउन थाल्‍यो 'सायोनारा' भन्‍दै।
अब धनबहादुरमा बच्‍पना सुधार्ने दृढता छर्लङगै देखिन्छ बिदेशको संगत र हण्‍डरले । उस्‍ले भिसा अनुमती नभएपनि नफर्किने निधो गर्‍यो । "पातलो गाठीको फराशिलो धनेको भाग्‍य पनि गतिलै रेछ "। साथीहरु खासखुस गर्थे । कारण उस्‍को सत्‍कार गर्ने भोजनालयमा एकजना स्‍थानीय युबती लठ्‌ठ परिसकेकी थिइन्‌ धनको ब्‍यबहार बाट। युबाहरुमा एउटा होडहुन्‍छ , बिपरीत लिङ्‌गीको मान जीत्‍ने । दौंतरी बीचमा धनले त्‍यो दौड जितिसकेको थियो । सम्‍बन्‍धलाई जीबन्‍त रुप दिने योजनामा मस्‍त थिए उनीहरु, दूर्भाग्‍यले अध्‍यागमन निरिक्षकको बल्‍क्षीमा पर्‍यो धन ।बचावटका शब्‍द थिनन्‌ । अध्‍यागमन अनुमतीलाई लत्‍याएको थियो उस्‍ले । बन्‍दी कक्षमा आ-आफना रुची र बिषयमा हराइरहेका झुण्‍ड भन्‍दा परको कुनामा बस्‍यो । नेपाल हुंदाको बीगत र जापान आएपछीको आइच्‍यान सँग मिलेर देखेको सपनाबारे गम्‍न थाल्‍यो ।' के हाम्रो सम्‍बन्‍ध यत्तिकैमा तुषारापात हुने भो त ?' ' आइच्‍यानले मलाई चटक्‍कै बिर्सन सक्‍छे ? '...गरोस्‌ पनि के ! जन्‍म थलोको सारा सुख-सुबिधा छोडेर किन आउँछे म जस्‍तो अल्‍लारेको पछिलागेर ? बुढो सारसले पँकेटा फड्‌फडाउँदा उडेका प्‍वाँख जस्‍तै महसुष गर्‌यो उस्‍को प्रेमसँबन्‍ध धुजाधुजा भएर उडेको । हुनपनि त अति-बिकशीत शहरका मान्‍छेहरुमा मानषिक सँबेदना भन्‍दा ज्‍यादा यान्‍त्रीक गती र भाव सुन्‍य मनको बाहुल्‍याता हुन्‍छ । बिस्‍तार अरुकोही आउनेछ ऊस्‍को मनमा । सोझी छ, दूख नपाए हुन्‌थ्‍यो !!आषा मार्‍यो त्‍यो सम्‍बन्‍धको ।
'धन, मैले वकीलसँग कुरा गरें ।' एकै सासमा थपी-हाम्रो बिबाह दर्ता नभएपनि भावनात्‍मक सम्‍बन्‍ध र साथको प्रमाड जुटाउछु म ।हामी सँगै छौं नि महिनौं देखी। म तिमीलाई टाढा हुन दिनेछैन आफुबाट !' मंगोलीयन बनोटको भिउंटे मुहारमा ठुलाठुला आँखाको तरेली भिजाउँदै शीशाको पर्दा बीचमा अन्‍तरापबाट बेदना पोखी ऊस्‍ले । तिमी... यहासम्‍म...??? बक्‍बकाउँदो स्‍वरमा सोध्‍यो आश्‍चर्य चकित धनले । डुब्‍न लागेको स्‍वासमा एउटा त्‍यान्‍द्रोको सहारा देख्‍यो धनले । साँच्‍चै त्‍यो मिहिनेती केटीले अध्‍यागमन कानुन्‌सँग कुश्‍ती खेलेर जिती उस्‍को प्रेमलाई । कसरी भन्‍ने , सम्‍बन्‍ध कच्‍चा धागो हो ? ऊनीहरुको सम्‍बन्‍ध त माया र बिश्‍वाषको बलियो गाँठोले जोडिएको छ ।
प्रीतीमा, सम्‍पन्‍न परिवारकी सुशिल केटी । सभ्‍यता छ । सुसंस्‍कार छ । नेपाली-हिन्‍दी चलचित्रमा शोख छ उन्‌को । अनि चलचित्र घर जान सक्‍ने आर्थिक पहुंच पनि । जब ऊ किशोराबस्‍थामा प्रबेश गर्छे, लोक कथामा मधुकरले दानबहरु बाट छुटाएर लगेको मालतीको रोमान्‍चकारी कल्‍पनामा डुबाउन रुचाउछे आफुलाई । चलचित्रका नायक-नायीकाको भाबभङ्‌गीमा हराउछे । अनी उमेरकै दोषहोला, सहपाठीको आकर्षक रुपबाट सम्‍मोहीत छ उ आजकाल ।साँच्‍चै मधुकर र मालतीको दुनियामा हराउने बाचामा दुबैजना घरमा थाहैनदिई भाग्‍छन्‌ । घरमा खल्‍लिबल्‍ली चल्‍छ , अत्तोपत्तो छैन उनको । गाइगुई चल्‍छ-भागे रे पृतीमा र आकाश !
उनका अभिभावकले निकै जोड गर्छन्‌ छुटाउनलाई - सम्‍पन्‍नताको दम्‍भ र यथार्थताको बिष्‍लेषण मिसाएर । ''छोडिदे छोरी,केही बिग्रेको छैन । पढ लेख , सबै ठीक हुन्‍छ २-४ बर्षमा । बिर्सिदेऊ तेसलाई।'' पृतीमाकी आमाले भनिन्‌। उनी मौन छिन्‌ । दुबैमा दृढ अठोट छ आजिबन साथको । यथार्थको धरातल अर्के छ । माध्‍यमिक तह पनि पास नगरेको केटोले बिहा गरेर कसरी पारिवारीक दायित्‍व सम्‍हाल्‍ने ? कल्‍पनामा त जिन्‍दगी गुज्रिन्‍न । आकाशमा हिनता र अत्‍यास बढ्‌दो छ । बिपरीतमा प्रितीमा दृढ छ । बिहान घर धन्‍दा गर्छे , दिउसो क्‍याम्‍पस जान्‍छे । अनि हरतरहले आकाशको परिबारलाई खुशी तुल्‍याउने ध्‍येयमा लाग्‍छे बाकी समय । आकाश बिस्‍तार-बिस्‍तार असन्‍तुलित हुदै छ । परिबारमा उस्‍को प्रभाब र महत्‍व गीर्दो छ । त्‍यसैले होला चिडचिडाहट र क्रुरता पनि बढ्‌दो छ उस्‍मा ।
पृती भने धर्ती जत्तिकै सहनशील छ । सारा पीडालाई एकान्‍तमा आँसुका ढीक्‍कामा बगाइदिन्‍छे । प्रमाण पत्र तह पनि पुरा गरिसकी उसले । आजकल पिताजीको भन्‍सुनले नोकरीपनि पाएकी छ। आकाश आफुलाई अपमानित महषुस गर्छ पृतीको यो सफलताबाट । पेटमा उनीहरुको मायाको निसानी बढ्‌दो छ । पृतीमाको एकमात्र आषा छ, सन्‍तान भएपछि आकाशमा बदलाब आउने छ । अहँ, स्‍थिती सहन र नियन्‍त्रण बाहिर गैसकेको छ । पित्री प्रधान समाजमा उन्‍ले छोरीलाइं जन्‍माएपछी त झन उग्रता बढेको छ आकाश र उस्‍को परीवारमा । केही लागेन पृतीमाको, छ महिनाको सन्‍तान च्‍यपेर आफ्‍नो अल्‍लारे प्रेमलाई धिक्‍कारर्दे माईतीको शरणमा जान्‍छे । अब जीन्‍दगी ऊस्‍लाई वाक्‍क भैसक्‍यो । माया-प्रेम-सँबन्‍ध सबै सबै उस्‍लाई मशान घाटको कथा जस्‍तै लाग्‍छ आजकाल । आकाशको धम्‍की र ताडना जारी छ । नशामा मातेर जान्‍छ ऊ पृतीमाको जन्‍म घर । तथानाम असभ्‍यता ओकल्‍छ । "छिमेकमा पनि नाकै देखाउन नहुने पारिसक्‍यो । " पृतीकी आमा फतफताउँछीन्‌ । झन्‌ दुख्‍छ पृतीको मन - धारीलो फलामले रेटे जस्‍तै । उनी पलायन हुन चाहन्‍छीन आकाशको नजर बाट , यो बीरही समाज बाट । पारिवारीक सल्‍लाह र एकजना नातेदारको सहयोगमा उनी जापान पुग्‍छीन्‌ । यात्राभरी ऊनको मन चङगा जस्‍तै हलुका भएर उड्‌छ जहाज सँगै । प्रेम, बिबाह, लोग्‍ने, घर...सबैलाई सँझिन्‍छीन‌ । शब्‍दमा पनि घृणा लाग्‍छ । कहालीलाग्‍दो बिगतमा फर्केर पनि हेर्ने ईच्‍छा हुन्‍न । ऊनी द्रिढ भएर सोच्‍छीन्‌- " एउटा नया जीन्‍दगी बाँच्‍छु , निष्‍फिकृ-स्‍वतन्‍त्रताको ।जसमा कुनै लैङगीक बिभेद हुन्‍न , श्रीमान पनि हुन्‍न र बन्‍धन्‌ पनि !"
नौलो समाजमा खुल्‍ला पंक्षी भएर बाँच्‍न चाहन्‍छीन ऊनी । अब यही एउटै मात्र धोको छ । समयको प्रबाह बग्‍दो छ । खात्राक-खुत्रुक काम पाएकी छन । तर आम्‍दानी खासै छैन , खोजी जारी छ । यसै सीलसीलामा एकजना फरासीलो सहयोगी भेटीन्‍छ । प्रवेश साँच्‍चै सहयोगी छ, मीहिनेती छ, एउटा आदर्श गुँण बोकेको युबक । पृतीमाको समय भागदौडमै बितिराखेको छ । सँघर्ष छ , नयाँ भाषा र परीबेष मा, तर बिगतको भन्‍दा कता हो कता सहज । नारी मन नहो, भाबनाको कोमल पत्र छेड्‌दै कहीलेकाहीं फुर्सदको समयमा अनायासै लहर उठ्‌छ-"यदी मेरो आकाशमा प्रवेशको ब्‍यबहार भैदिएको भए...।" कल्‍पनाको तड्‌पनबाट ओर्लीएर मन बुझाउँछे- "शुरुमात ऊ पनि कहाँ त्‍यस्‍तो थियो र ? सब यस्‍तैहुन्‌ लोग्‍ने मान्‍छे ! "उनको मनले खबरदारी गर्छ- फेरी त्‍यही मायाको भोक छ तँलाई ? कम्‍जोरी हो यो माया । घण्‍टौँ सम्‍म ओल्‍टे र कोल्‍टे फेरेर बिताउँछे । मनभरी प्रश्‍नोत्तरका तुफान उठ्‌छन्‌ । बिहानीपख बल्‍ल आँखा लागेछ । ऊ त सपनामै युद्‌धको जेहाद छेड्‌दै थिई- बिहा गर्नु, लोग्‍ने हुनु मात्रै पबित्र सँबन्‍ध हो ? कदापी होइन ! एक्‍लो जन्‍मीनु, मर्नुको बीचमा किन कसैको सहारा चाहीन्‍छ? फेरि म तेही दलदलमा फसुँ ?? महाभारत कालमा अर्जुनलाई श्रीकृष्‍ले संझाएका थिए- पार्थ, तिमी युध्‍दको मैदानमा छौ-धर्म र न्‍याय को वकालतको लागी । नाता- सँबन्‍ध केबल भ्रम हुन्‌ । च्‍यतेर हटाउ भ्रमका पर्दालाई ।त्‍यो नव परिचित फरासिलो केटोलाइ टाढा पन्‍छाउने प्रयाशमा थिइन मनको कुनाबाट । आकाशको दानबी रूप संझीदा बद्रोहको आगो दन्‍किन्‍थ्‍यो मनमा । त्‍यसैको ज्‍वालामा कागजका पत्ता सरी जलाउँदै थिइन्‌ पुरुष प्रधान समाजमा महीलाको दासत्‍व सम्‍बन्‍ध । झिसमीसे बिहान भैसकेको थियो । झ्‍यालको अन्‍तराप बाट भित्रिएको चिसोपनले कोठा ओसींदै थियो । तर उनी ऊष्‍णतामा छट्‍पटाइ रहेकी थिइन्‌ । पुस्‍तौं देखी बज्‍यैबाट आमा र आमाबाट उन्‌मा आएको नारी सुलभ कोमल मनले बिद्रोहको आधुनिक बिचारलाइ अबरोध सिर्जना गरी रहेको स्‍पष्‍ट देखिन्‍थ्‍यो । अन्‍तर मनमा त्‍यो नवपरिचीत आकर्षक युबकले बलियो घर बनाइसकेको थियो ।
उनका हातहरु बिस्‍तरा भित्रै सल्‍बलाइ रहेका थिए लोग्‍नेको न्‍यानो आलिङ्‌गनको लागी, अनि फेरि एउटा सँबन्‍ध रोपणकालागी । निद्रामै बरबराउंदै बिच्‍छ्‌यौना बाट जुरुक्‍क उठीन्‌-"सबै पुरुष आकाश हुँदैनन्‌ ।...एउटा परिपक्‍व संबन्‍धको खाँचो छ !"
टोकीयो, डिसेम्‍बर २००७